Xbox ho an'ny iPhone, ilaina raha manana ny console Microsoft | Vaovao IPhone
Xbox ho an'ny iPhone, ilaina raha manana ny console Microsoft ianao
Androany ianao tsy afaka mieritreritra ny hanana a vokatra mahomby ao amin'ny tontolon'ny teknolojia tsy misy fampiharana miaraka amin'ny iPhone, ary efa fantatr'i Microsoft izany nanomboka teo am-piandohana. Izany no antony nanokanan'ny orinasa Redmond loharanom-pahalalana marobe ho an'ny fampiharana azy mpiara-mitory ho an'ny Xbox, ary tonga ny fotoana hijerena akaiky kokoa.
2 Bebe kokoa
Ny iraka lehibe ampiasain'ny fampiharana dia ny ahafahantsika manao hetsika sasany haingana kokoa noho isika amin'ny lalao console miaraka amin'ny lavitra. Tena mahaliana noho izany ny fampiasana ny rindranasa ho an'ny fitantanana ny hafatra manokana miaraka amin'ireo mpampiasa hafa, raha te hidira lahatsoratra (mitaky amin'ny tambajotra WiFi iray ihany) na mahita ny lisitry ny namana mandritra ny filalaovana lalao nefa tsy manelingelina ny lalao, ohatra.
Ho fanampin'izany, mamela antsika hanao ny fividianana tadiavintsika ny rindranasa, ohatra amin'ny asa ary rehefa tonga any an-trano dia efa ny lalao alaina amin'ny xbox, tadidio foana fa tsy azontsika atao ny mampandeha ny safidin'ny angovo angovo ao amin'ny lalao console, satria ny console dia tokony hihazona ny fifandraisana amin'ny tambajotra hahafahana misintona ireo lalao raha tsy eo izany.
Tsara homarihina ihany koa ny fahana voalohany ahafahantsika manaraka ny zava-mitranga rehetra manodidina ny console: hetsika eo amin'ny namana, horonan-tsary sy sary nalaina avy amin'ny mpifanerasera aminay, ny vaovao momba ny lalao ananantsika na ny fanambaràna avy amin'i Microsoft dia singa sasantsasany izay azontsika jerena amin'ity ampahany ity.
Mety ho iray amin'ireo teboka mahaliana indrindra na fampandrenesana fanosehana, izay mampahafantatra antsika ny hetsika rehetra nefa tsy mila miaraka amin'ny console na amin'ny tranokala Xbox misokatra. Azontsika fantarina amin'izay ny fotoana nandraisana hafatra na izay mitranga ao amin'ny kliobantsika amin'ny iPhone amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro. Marihina fa ny rindrambaiko dia tsy azo alamina mba tsy hahazo fampandrenesana ny zava-bita, izay mety somary manelingelina antsika izay te hahalala amin'ny fotoana anaovana hafatra manokana fa tsy liana izahay ny handray fampandrenesana isaky ny mahazo Gs vaovao.
Ny fampiharana dia afaka tanteraka, tsy manana dokam-barotra izy ary rehefa afaka taona vitsivitsy dia miasa amin'ny hafainganam-pandeha azo ekena ihany izy io, na dia mety noho ny fahatsoran'ny iPhone 7 aza izany, mazava ho azy. Ataovy izay ilaina, raha ilaina ny manana Xbox.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Xbox ho an'ny iPhone, ilaina raha manana ny console Microsoft ianao
Fitsarana an-tsokosoko ho an'i Apple hanidiana iPhones rehefa miditra ao anaty fiara
Podcast 8x18: Ny iPhone 8 dia manomboka miteraka fahatsapana